Faahfaahin ku saabsan kulumadii laga ciyaaray horyaalka Talyaaniga
Updated About:265 days ago 0
Naadiga Intermilan ayaa guul aad uweyn ku daahfurtay horyaalka talyaaniga,kadib markii ay 3/0 kaga adkaadeen naadiga yar ee Pescara,goolasha inter waxaa u kala saxixiay (Sneidjer,Milito,Coatinho).
Intermilan ayaa shalay soo bandhigtay ineey sanadaan ka go’antahay ineey qaadaan horyaalkan kadib markii ay lasoo wareegtay laacibiin qatar ah kuwaasoo kala ah (Gargano,Alvaro Perera,Cassano,iyo Palacios).
Goolka koowaad ee Intermilan ayaa yimid daqiiqadii 17aad kadib markii uu Sneidjer baas aad uqurxan kahelay Diego Milito.
Inter goolkaas kuma kaaftoomin ee laba daqiiqo kadib kubad ay si wada jir ah usoo habeeyeen Sneidjer iyo Cassano ayay gacanta kasaareen Gool magafaha Milito kaasoo isna si quruxbadan udaba mariyay goolhayaha Pescara.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii laysugu soolaabtay ayay inter sii waday weerarka ay ku haysay goolka Pescara,goolka 3aad ee ciyaarta ayaa yimid kadib markii kubad uu soo farsameeyay Milito gacanta kasaaray wiilka yer ee reer Brazil Coatinho kaasoo muujiyay in sanadaan Inter ay uqalanto ineey qaado horyaalka.
Dhanka kale naadiga Ac-milan oo iska iibisay sanadaan laacibiintii laf dhabarta u ahayd ayaa guuldaro xanuun badan kala kulantay naadiga Sampadoria kadib markii kulankii furitaanka horyaalka talyaaniga lagu suldaaray 1/0,waxaana goolka kadhaliyay laacibka lagu magacaabo A.Costa.
Ciyaartoyda Milan ayaa shalay dhamaantood umuuqday kuwo daalan sina uniyad jabsan halka Sampdoria ay kubada iska maamulaneeysay inta garoonka lagu jiray waxaana lays dhihi karaa way uqalantay ineey shalay milan garaacdo.
Daafaca milan ayaa shalay u muuqday mid aad uqalqalsan iyadoo Bonnera uu sameeyay dhowr qalad balse aysan ka faa’iideysan ciyaartoyda Sampdoria.
Milan ayaa iska iibisay ciyaartoy aad muhiim ugu ahayd sida Ibrahimovic oo ahaa gooldhaliyahooda weyn iyo daafaca birta ahaay ee Tiago Silva,sidookale waxay fasaxday ciyaaryahanada kala ah Inzaghi,Gattuso,Van Pomel,Nesta,iyo Cassano oo ugu danbeeyay kaasoo aaday naadiga ay cadawtooyada kala dhaxeyso ee Intermilan.